Lynda ANDRIATSITONTA famandrosoana, HVM, kaominina	2 Comments juil 28, 2015
Tantsaha avokoa ny ankamaroan’ny mponina ao min’ny kaominina Fiombonana sy Ankadimanga. « Tara anefa ny fampandrosoana ireo kaominina roa ireo noho izy nisaraka tamin’ny kaominina lehibe, Ambohidrapeto. Izany indrindra no antony nilatsahan’i Christian Rakotonaivo na i Dadanaivo ho Ben’ny Tanana an’Ankadimanga sy Gabriel Randriamnantena ho an’ny kaominina Fiombonana. Te handray anjara amin’ny fampandrosoana ny tanana izy roa lahy ireto izay miara-miasa amin’ny antoko HVM na Hery Vaovao an’i Madagasikara. Marihina fa samy laharana 01 izy roa ao amin’ny bileta tokana.
Fambolena no tena foto-piveloman’ny vahoaka ao amin’ireo faritra ireo. Raha ny totalin’ny tany aza dia mirefy 200 ha ny velaran-tany ambolena ao. Vokatry ny tondran-drano farany teo, simba avokoa ny foto-drafitra asa rehatra mahakasika izany, hoy i Dadanaivo. Nanao asa tana-maro ireo mponina amin’ireo tanana roa ireo omaly, hanarenana ny fefiloha potika tanteraka ao Andranomihady izay mirefy 04 km. Lalana ampiasain’ny olona amin’ny fiainany andavanandro mihitsy izy ity fa indrindra ny mpianatra.
Efa nandray anjara ihany tamin’ny fampiroboroboana ny kaominina izy ireo, toy ny fanomezana jiro amina tanana sasantsasany, fanamboarana ny CSBII Ankadimanga sy ny lalana,… »Hanohizana izany asa vita izany no anisany nilatsahanay ho Ben’ny Tanana ».
Amin’ny alalan’ny fandaharan’asa no handresen-dahatra ny vahoaka hifidy izay fantany fa hampandroso ny tanana. Vaindohan-draharaha na amin’i Dadanaivo na i Atoa Gabriel ny fanarenana ny tohan-drano eny an-toerana izay iankinan’ny tantsaha tanteraka eo amin’ny fampidirana ny rano. Ankoatra izany,tafiditra ao anatin’ny tetikasany ihany koa ny famitana ny lalam-be sy ny lalan-kely ho lasa rari-vato (pavé) ary ny fanitarana ny toeram-pitsaboana ho lasa hopitaly. Mampanjaka ny tsy fandriampahalemana ny tsy fisian’ny jiro manazava ny tanana. Vina ho tanterahin’ireto kandida ireto ny fanitarana ny jiro isam-pokontany.
‹ Tantine Louisette laharana faha-3 ao amin’ ny kaominina Ampanotokana : Fanabeazana no vaindohan-draharaha.	› Lalatiana Rakotondrazafy: Roso ny dia, tsy mipody koa .
juil 29, 2015	@ 00:55:32
juil 29, 2015	@ 18:40:02